साफ च्याम्पियनसिप : नेपाललाई इतिहास रच्ने मौका, प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई फाइनलमा प्रतिवन्ध – Gandak News
गण्डकीमा १६१ जनाको परीक्षण गर्दा १६ जनामा संक्रमण…
मुस्ताङ र म्याग्दीमा हिमपात
बागलुङमा एकै विद्यालयका २५ जनामा कोरोना पुष्टी
सुनको मूल्यमा गिरावट, तोलाको कति पुग्यो?
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्न सकिन्छ
एमालेका अध्यक्ष ओलीको आज पद बहाली हुने
आजेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता…
नाइजेरियामा डुङ्गा पल्टिँदा बालबालिकासहित २९ जनाको मृत्यु
कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन आज
मुस्ताङ प्रवेश गर्न पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट र पूर्ण खोप अनिवार्य
गण्डकीमा १६१ जनाको परीक्षण गर्दा १६ जनामा संक्रमण पुष्टि
बागलुङमा भोलिदेखि मतदाता नामावली संकलन गरिँदै
साफ च्याम्पियनसिप : नेपाललाई इतिहास रच्ने मौका, प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई फाइनलमा प्रतिवन्ध
गण्डक न्यूज द्वारा ३० आश्विन २०७८, शनिबार १२:४६ मा प्रकाशित 0
तस्बिर : एन्फा
माल्दिभ्समा जारी १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल खेल आज हुँदैछ। उपाधिका लागि नेपाल र भारत मैदानमा उत्रिदैछन्। खेल आज राति ८:४५ बजे राजधानी मालेस्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुँदै छ ।
आज हुने फाइनल खेलमा नेपालका स्ट्राइकर अञ्जन विष्ट भने खेल्न पाउने छैनन् । लगातार दुईवटा खेलमा पहेंलो कार्ड पाएका कारण उनले फाइनल खेल गुमाउन पुगेका हुन्।
साफको फाइनलमा पुगेर ऐतिहासिक सफलता पाएको नेपालले आज पुनः भारतलाई पराजित गर्न सके इतिहास रच्ने मौका पाउने छ । तर, इतिहास हेर्दा सातपटक प्रतियोगिताको उपाधि उचालिसकेको भारत विरुद्ध जित निकाल्न भने नेपाललाई सहज हुने छैन । अहिलेसम्म नेपाल र भारत २२ खेलमा आमनेसामने भएका छन् । जसमा भारतले १५ खेलमा जित हात पारेको छ । भने, नेपालले २ खेलमात्र जितेको छ । जसमा पाँच खेल बराबरी भएको छ ।
साफ च्याम्पियनसिपमा यसपटक पाँच टोलीले सहभागिता जनाएका थिए । राउन्ड रोबिन प्रणालीमा भएको प्रतियोगितामा लिगको शीर्ष दुईले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् ।
प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई फाइनलमा प्रतिबन्ध
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले भारतविरुद्धको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल गुमाउने भएका छन्। प्रतियोगिताको लिग चरणका दौरान दुई फरक खेलमा पहेंलो कार्ड पाएको भन्दै साफले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
दक्षिण एसियाली फुटबल (साफ) ले तयार पारेको प्रतियोगिताको नियमावली अनुसार फरक खेलमा पहेंलो कार्ड पाएमा खेलाडीले अर्को खेल खेल्न नपाउने उल्लेख छ। खेलका क्रममा रातो कार्ड पाएमा भने अफिसियलले पनि अर्को खेल गुमाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, साफले अलमुताइरीले दुई फरक खेलमा पहेंलो कार्ड पाएको कारण देखाउँदै फाइनलमा प्रतिबन्ध गरेको हो।
यसैगरी भारतका प्रशिक्षक इगोर स्टिमाचले फाइनलमा प्रतिबन्ध भोगेका छन्। स्टिमाचले माल्दिभ्सविरुद्ध भएको खेलमा दुई पहेंलोसहित रातो कार्ड नै पाएका थिए। स्टिमाचसँगै अलमुताइरीलाई पनि प्रतिबन्ध गरेकाले नेपाल र भारतले मुख्य प्रशिक्षकबिना नै फाइनल खेल खेल्नुपर्ने भएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार…
कास्की कांग्रेस सभापतिको लागि किशाेरदत्त र…
कास्की काँग्रेस सभापतिमा किशोरदत्त बराल विजयी
यी हुन् अ‍ोलीले प्रस्ताव गरेका एमालेका १९…
ईश्वर र शंकरसहित एमालेका पाँच पदाधिकारी निर्विरोध
कास्कीको अन्नपूर्ण स्थित पाउँदुरमा बस दुर्घटना,…
‘हनी हन्टिङ’ हेर्न मन छ ? अर्को हप्ता लान्द्रुक…
आज लक्ष्मीपूजा: धनधान्य र सम्पन्नताकी…
तिहारको चौथो दिनः गाई, गोरु, गोवर्धन र…
नेपाल संवत् ११४२ सुरु, आजै म्हः पूजा